SPORTS: Ciyaar feer layaab leh oo xalay dhex martay Youtuber iyo feeryahan caan ah : Calanka.com
SPORTS: Ciyaar feer layaab leh oo xalay dhex martay Youtuber iyo feeryahan caan ah
in Sport, Xulka
Habeenkii xalay waxaa magaalada Miami, gobolka Florida ee dalkaasi Mareykanka ku dhexmartay ciyaar feer layaab leh taas oo u dhaxeysay Youtuber-ka caanka ah ee Logan Paul (26-jir) iyo feeryahanka caanka ah eesuumanka badan haysta ee Floyd Mayweather (44-jir).
Ciyaartan oo aheyd mid xiiso gaar ah qabtay ayaa waxaa la xayeysiinayay in muddo ah, waxaana siyaabo kala duwan iyo toosba u daawaday malaayiin shacab oo daafaha caalamka ku kala sugan.
Garoonka weyn ee Hard Rock Stadium ee magaalada Miami oo ay ciyaartani ka dhacday ayaa waxaa soo xaadiray dadweyne farabadan oo xiiseynayay feerkan, waxaana la isla gaaray ilaa iyo wareegga sideedaad.
Feeryahan Mayweather oo ciyaarta ku guuleystay ugu dambeyna ayaa warbaahinta u sheegay ciyaarta kadib in uu la yaabay feerka uusoo bandhigay youtuber Logan Paul islamarkaana uu ku gaarsiiyay ilaa wareegga 8-aad.
” – Waan ku raaxeystay ciyaart, walow aan qirsanahay in aan 21-jir aheyn. Waa uu ka wanaagsanaa sidii aan u maleynayay”, ayuu yiri Mayweather oo hadalkiisa intaa sii raaciyay in Paul uu ahaa feeryahan fir-fircoon oo aan la yaabay.
Ciyaartan oo aan loo raacin shuruucda qaar ee feerka sida aarbitare la`aan iyo in labada ruux ee feertameysay ay kala kiilo sarreeyeen. Paul ayaa ka kiilo sarreeyay Mayweather, waxaana uu culeyskooda kala ahaa 85 iyo 70 kiilo.
Youtuberka ayaa dhankiisa sheegay ciyaarta ka dib in uu ku faraxsan yahay in uu “la tacaalay” Mayweather, isagoona ku kaftamay in ciyaarlabaad uu doonayo.
Feeryahanka caanka ah ee Mayweather ayaa ciyaarta feerka ka fariistay sannadkii 2015-ka, isagoo markaasi ciyaaray 50 ciyaar oo uu dhammaantood ku guuleystay, suuman kala duwana ka helay.
Feerkii xalay ayaa ahaa mid dhaqaale lagu raadinayay kaas oo xiiso gaar ah loo yeelay, balse wali ma cadda in lagu khasaaray iyo in kale walow ciyaar sidaan oo kale oo uu feeryahanka la galay feeryahan kale oo japanese ah sannadkii 2017, kaas oo ay ku khasaareen raggii soo abaabulay.